Rikoooo.com - Misintona ny toerana
Joined: 03 Jolay 2016, 12:49
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by PADA52 » 05 Mar 2017, 18:24
aleo aloha aho milaza fa manome serivisy lehibe ianao, ao anatin'izany ilay "tsy andoavam-bola", ho an'ireo Flyers mafana fo toa ahy! Avy amin'ny tranonkalanao no nakariko fiaramanidina vitsivitsy, roa amin'ireo novolavolaina tsara toa ny fonosana Boeing 777-200ER Ultimate, saika nampiasaiko io fiaramanidina io tao FSX fanontana volamena miaraka amina fonosana haingam-pandeha.
Te-hanoritra aho fa tsy mandeha tsara ny sehatrin'ny seranam-piaramanidina sasantsasany nakariko, nanandramako manokana indrindra izy tamin'ny seranam-piaramanidina roa, tena namboarina tsara: ny seranam-piaramanidin'i Klagenfurt (Aostria) ary ny Richmond International (VA) Etazonia , samy manana olana amin'ny rafitry ny fijanonan'ny ILS, ny fiatraikany voalohany amin'ny fiaramanidina amin'ny zavatra tsy hita 30 metatra ambonin'ny làlambe 28; ny faharoa (Richmond) ao amin'ny ILS 02 dia manamboatra ny sidina mankany amin'ny faran'ny làlambe fa tsy ny fiandohan'ny làlana 02.
Amin'ireo tranga roa ireo dia nesoriko ireo Scenery vaovao ary samy miasa tsara ny ILS.
Mety manana vahaolana vitsivitsy amin'ity ianao izay tsy fantatro.